काला सागर तट मा स्थान के सबै भन्दा पूर्ण बाँकी थियो बनाउन चयन गर्न? Annunciation! मनोरञ्जन केन्द्र - को पर्यटकहरु संग लोकप्रिय छ कि एक ठाउँ। हरेक स्वाद र रंग लागि - 20 वरिपरि संस्थाहरु ती सबै तिनीहरूले भन्न रूपमा, को गाउँमा। मनोरञ्जन केन्द्र काला सागर को किनारमा, सुसज्जित समुद्र तट, स्वादिष्ट र पौष्टिक खाना मा मनोरञ्जन, सहज आवास को एक ठूलो सूची प्रदान गर्नुहोस्।
र अब गाउँमा बारेमा केही जानकारी। यो प्रायद्वीप बीच स्थित छ Vityazevskim मुहाना र Kizilshtatskim, स्वर्गीय स्थान छ - कला। Annunciation। मनोरञ्जन "Carnation", "डन" "ट्याबनेतृत्व," "Stavropol", "संकेत" र अन्य hospitably यसको ढोका छुट्टी सिजन को सुरुमा खुलेको छ। को क्रास्नोडार क्षेत्र मा गाउँ काला सागर तट मा सबैभन्दा आराम र सहज स्थानहरू रूपमा बुझे। तर Annunciation एक समुद्र तट छुट्टी लागि मात्र होइन ज्ञात। अक्टोबर देखि जलपक्षी प्रतिनिधिको लागि खुला शिकार सिजन छ। पर्यटकहरु गाउँमा संख्या मा कमी महसुस गर्दैन, त्यसैले यो यात्रा अघि एक महिनाको लागि आवास बुक गर्न उचित छ।
टाढा छैन Anapa देखि तटीय क्षेत्रमा एक सुन्दर नामको एक ठूलो मनोरञ्जन केन्द्र हो "तोडने डन।" यो सम्पूर्ण परिधि एक बार घेरिएको छ, 1.2 हेक्टरमा को एक क्षेत्र। कुनै पहुँच निषेधित छ, कार्यकर्ता सुरक्षा विभाग को निम्न क्रममा। यस क्षेत्रमा आगन्तुकहरूलाई प्रत्येक पूरै, अद्वितीय शुद्ध र उपचारात्मक हावा बुझ्न सक्षम हुनेछ। बस कल्पना: एक हात मा - काला सागर, र अन्य मा - निको माटोको हाइड्रोजन sulfide मा धनी मुहाना Vityazevskogo।
वर्ग "सुइट" घरहरू र मानक घरहरू मनोरञ्जन "डन" (Annunciation गाउँ) छुट्टी मा आगंतुकों लागि वास्तविक घर बन्छन्। यो एक, डबल ट्रिपल र quadruple आवास भाडामा गर्न सम्भव छ। मानक केबिन वातानुकूलन वा जलवायु-नियन्त्रण प्रणाली, टिभि र फ्रिज संग सुसज्जित छन्। यो निवास लाभ शौचालय र वर्षा को उपलब्धता छ। प्रति रात आवास को लागत 1100 rubles देखि सुरु हुन्छ। (खाद्य - 1700 दल्नु देखि।)।
अतिथिहरूको स्विमिंग पूल पहुँच छ। आफ्नो सम्पूर्ण दुई: ठूलो (10.6h4.20 पु,2मिटर गहिराइमा) र सानो (4x5 पु, 60 सेमी को गहिराई)। मनोरञ्जन प्रशासन "डन" (Annunciation) को अवकाश अतिथि को हेरविचार गरे। तिनीहरूले सक्रिय खेल समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ: टेनिस वा भलिबल। रुचि व्यक्ति, खुला हावामा संग जिम खेलकुद जटिल प्रस्ताव गर्दै वयस्क र बच्चाहरु मा रूपमा गणना। समुद्र तट मा त्यहाँ पनि मनोरञ्जन व्यापक दायरा छ। यो catamarans, जेट skis, केले डुङ्गा सवारी, स्कुबा डाइभिङ, विन्डसर्फिङ र यति मा।
यो Anapa एक प्रसिद्ध रिसोर्ट छ। मनोरञ्जन केन्द्र, (को Annunciation को गाउँ) शहर, एक लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य मात्र 30 मी स्थित छ जो। त्यो "Carnation" भनिन्छ। ढाल र ईटा: पर्यटकहरुका लागि दुई प्रकारका घरहरू प्रदान गर्दछ। एक घर 2,3र4मान्छे हुन सक्छ भाडामा। दिन मा कुनै सुविधाहरु संग घरहरू लागि 720 rubles भुक्तानी गर्न छ। अझ सहज वातावरण छ चाहनेहरूलाई, यो त्यहाँ कुल वा आंशिक सुविधा छ जहाँ भवन, मा सार्न प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लो विकल्प बाथरूम र धेरै भाडादारों को शवर कोठा को प्रयोग पनि समावेश छ। बस पौडिरहेका र Sunbathing आफ्नो बिदा सीमित नगर्ने पर्यटकहरूको सक्रिय आफ्नो फुर्सदको समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले फुटबल, बास्केटबल, भलिबल खेल्न प्रोत्साहित गरिन्छ। पनि आधार इलाका मा एक बिलियर्ड र टेबल टेनिस छ।
काला सागर कहाँ शान्त छ, तर राम्रो बाँकी? Annunciation! मनोरञ्जन केन्द्र, मा स्थित छ जो: ट्याबनेतृत्व लेन, 15, पूरै सफा हावा, न्यानो पानी, सुखद सूर्यका रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ। "ट्याबनेतृत्व" - यो एकदम प्रतीकात्मक नाम हो। निर्माण घरहरू को क्षेत्र मा, रहन डिजाइन। तिनीहरूले सहज सोख लागि सबै प्रदान गर्नुहोस्। प्रत्येक कोठा बाथरूम संग सुसज्जित छ। दैनिक लागत भिन्न 1500 देखि 2200 rubles गर्न। मेहमान गर्मी भान्सा मा खाना पकाउने मा Indulge गर्न सक्नुहुन्छ। खेल उपकरण भाडा, kiteboarding स्कूल क्याफे को काम मा आधारित।
तपाईं सबै भन्दा राम्रो रहन कहाँ ठाउँ खोज्न? Annunciation, "Stavropol" को आधार! यो मात्र के सपना सक्नुहुन्छ सबै कुरा छ! यसलाई दूर व्यस्त रिसोर्ट्स र प्रदूषित सडक बाट, काला सागर तट को एक ecologically सफा क्षेत्र मा स्थित छ। अर्डर समुद्र तट गर्न प्राप्त गर्न, 50 मीटर को कुल हटाउन हुनेछ। अतिथिहरूको डबल र ट्रिपल कोठा विभाजित छन् जो काठ कटेज, मा रखे छन्। प्रति व्यक्ति जुन बस्ने को लागत, 900 rubles लागत, र मौसम को उचाइ मा हुनेछ -। 1100 दल्नु। तपाईं आफ्नो वा भोजन कोठामा खान सक्छ। मनोरञ्जन लागि त्यहाँ सना, टेनिस, यात्रा, बिलियर्ड्स, घोडचढी छन्।
Anapa जिल्ला आउँदै, सबैलाई रहन सबै भन्दा राम्रो स्थानको लागि देख छ स्मरणीय छ। Annunciation, "संकेत" मनोरञ्जन स्थित छ जो, साना बच्चाहरु परिवार संग लोकप्रिय छ। यो तट मा स्थित छ। समुद्र तट 2-4 मिनेट खुट्टा (100 मीटर) मा आइपुग्दा छ। यो छाते र sunbeds संग सुसज्जित छ, पानी सवारी छन्। एकल डबल, तीन र quadruple कोठा मा बाँच्न सक्छ बाँकी समयमा। आवास को न्यूनतम लागत - 1200 rubles। यो मूल्य नास्ता समावेश छ। इलाका एक नृत्य तल्ला, पुस्तकालय, बलिंग र बिलियर्ड्स लागि सुविधाहरु छ।
Ulyanovsk मा चलचित्र कहाँ हेर्न? शहर सिनेमाहरू: एक सिंहावलोकन
Daikon को सजिलो पकवान
आइसक्रिम देखि लाठी देखि अचम्मको कलाकृतिहरू
औषधि "हर्सहेडनेबुला मलम" - को संरचना र प्रयोग
अल्छी बारेमा लोक कथा - धेरै देशहरूको साहित्यको peculiar एक घटना